Kusolwa ukungaziphathi kahle ngokunyamalala kowayefunwa yiChiefs
Kusolwa ukuziphatha ngokunyamalala kowayefunwa yiChiefs
Kunesikhathi lapho uDeolin Mekoa, owayeyibamba kwiMaritzburg United, kwakunamahlebezi okuthi ufunwa yiKaizer Chiefs neMamelodi Sundowns, esayincinza kubonakale kwiTeam of Choice.
UMekoa wake wayibamba ngisho kuma-Olympics neqembu lesizwe le-Under 23, eRio, eBrazil, ngo-2016. Ngaleso sikhathi kwakuvela ukuthi uyinyama emaqenjini aseGoli, ikakhulukazi iChiefs neSundowns, okwakuthiwa babangisana ngokumsayinisa.
NakwiBafana Bafana lo mdlali wayeqalile ukubizwa ngoba lalingangabazeki ikhono lakhe kunobhutshuzwayo, okuyinto okumele ukuthi usenayo namanje.
Akukho ukungabaza ukuthi abalandeli bebhola abaningi baseNingizimu Afrika abazi nokuthi ukuphi lo mdlali njengamanje, nokuthi ngabe usalidlala yini ibhola. Mhlawumbe abambalwa abaziyo ngoMekoa, yilabo abayilandelayo imidlalo yeGladAfrica Championship.
UMekoa ubegijima kwiBizana Pondo Chiefs edliwe yizembe kwiChampionship ngesizini edlule. Leli qembu lase-Eastern Cape lalimthole ngemuva kokulaxazwa yi-Ajax Cape Town nayo eyayimthole elaxazwe yiTeam of Choice okuthiwa yayisikhathele ukungaziphathi kahle kwakhe.
FUNDA NALA: UMotaung junior ugixabezwe ngesikhundla esikhulu kwiChiefs
Labo ababesondelene nalo mdlali bathi inkinga yakhe enkulu ukuzithandela amanzi amponjwana. Kusobala nokho ukuthi izinto ziya ngokubheda kuMekoa njengoba sekumele akhethe ukuthi uzodlala kwi-ABC Motsepe League, nomake uzolishiya iqembu afune elinye.
“Ngicabanga ukuthi le sizini ayizange iphethe kahle ngenxa yento eyenzeke kwiBazana Pondo Chiefs, edliwe yizembe yashona kwi-ABC Motsepe League. Akubanga yinto enhle kodwa ngibajoyine emidlalweni embalwa yokugcina yesizini,” kusho uMekoa.
“Kube yinto enhle kimi ukuthola ithuba lokudlala nokuzama ukubuyela ekubeni umqemane ngoba bese kuphele isikhathi eside ngingadlali. Kube yinto emnandi kakhulu kimi ukubuyela enkundleni.
“Nokho ukudlala ngaphandle kwabalandeli bekungekuhle ngoba wonke amaqembu adinga abalandeli ukuthi abeseke.
“Uma kunabalandeli iqembu lidlala kahle, kanti uma kungekho muntu enkundleni akubi umuzwa omuhle. Ngicabanga ukuthi ukube abalandeli bebekhona bebezosiphusha ukuthi sidlale kangcono sizuze okuthile,” kusonga uMekoa.
Previous Previous post: UMotaung Junior ubonga uMdali ngesikhundla asinikwe kwiChiefs
Next Next post: ISundowns ‘ibophe’ izihlabani zayo ngezinkontileka ezinde